သင့်ရဲ့ကလေးတစ်ကောလိပ်ဗိုလ်မှူး Choose ကူညီပေးခြင်း
by ဂျက်ကီ Burrell
အဘယျသောအခါအ & ဘယ်လို (အားလုံးရဟတ်ယာဉ် Going မရှိရင်) ကိုကူညီပါရန်
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုသူလုပ်ဖို့လိုလားအတိအကျသိမထားရင်, အဓိကရွေးချယ်ရာတွင်၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင့်ကလေးသွားပါစောင့်ကြည့်ခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌ရှိကြ၏ထက်နှင့်အမှုအရာသည်ယခုအခါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဘယ်အရာကိုအခါနှင့်မည်သို့ကူညီပေးဖို့, နှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ - ဒီတော့ဒီမှာအဓိကရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးပြည့်စုံသောမိဘလမ်းညွှန်ပါတယ်။
07 ၏ 01
တစ်ကောလိပ်ဗိုလ်မှူးကြေညာ: အဘယျသို့လိုက်တဲ့အခါ & ဘယ်လို
Cultura / ဖရန့်နှင့်ဟယ်လီနာ / Riser / Getty Images
ကောလိပ်ဗိုလ်ကြီးနှင့်အဓိကသို့ဝင်ပေါက်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသိသိသာသာကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကစိတ်ဝင်စားမယ့်သူမည်သူမဆိုမှပွင့်လင်းကြသည်။ အခြားသူများကလိုအပ်ချက်လိုအပ် - တချို့အကြီးအကျယ်-Impact ဗိုလ်ကြီးစာစီစာကုံး, တွင်လည်းနှင့်အင်တာဗျူးများလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းဆိအမှန်တကယ်စာရွက်စာတမ်းဖိုင်ကိုမှအငယ်တန်းတစ်နှစ်ရဲ့ start သည်အထိရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဒီတော့သူကဘာလာသောအခါနှင့်မည်သို့ယခုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ (ထိုအခါအမှန်တကယ်စာရွက်စာတမ်းဖိုင်ကိုမှစောင့်ဆိုင်းနှင့်ဆက်စပ်အချို့အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်။ ) နောက်ထပ်»
07 ၏ 02
တစ်ဦးက Zillion အဓိက, က6ပညာရေးဆိုင်ရာဒေသများ
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, အာကာသယာဉ်မှူးပညာကနေ viticulture မှအရာအားလုံးထဲမှာဗိုလ်ကြီးရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ ထိုအအသညျးအများထဲမှကောက်ဖို့ကြိုးစားနေကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဘို့, ကစည်းစိမ်ဥစ္စာ၏အရှက်မရင့် - ကလွှမ်းမိုးသော-သမီးတစ်ဦးအရှက်ပါပဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာထိုကောလိပ်ဗိုလ်ကြီးအနုပညာ, သိပ္ပံ, စီးပွားရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုများအပါအဝင်ခြောက်ဦးကျယ်ပြန့်ပညာသင်နှစ်ဒေသများသို့အားလုံးပြိုလဲ။ သို့ဖြစ်. အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသို့ delve, ပထမပညာသင်နှစ်ဧရိယာအားဖြင့်စာရင်း browse ။ (အခြားဘာမျှမဖြစ်လျှင်, အာကာသယာဉ်မှူးပညာနှင့် viticulture တူသောအကြောင်းအရာများသင့်အကြောင်း chat ဖို့အများကြီးကိုငါပေးမည်။ ) နောက်ထပ်»
07 ၏ 03
Undeclared! အဆိုပါ clueless နှင့် Undecided များအတွက်အကူအညီ
ဒါဟာသူ့အဓိကရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းဆိရဲ့အလုပ်ပါပဲ။ ဥစ္စာကြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သူ့ကိုအားပေးထောကျပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုသူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူကပဲသေချာမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့2နံနက်ထိတ်လန့်အတွက်ကိုခေါ်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာစတင်ရန်မသိသောအခါ, ကောင်းစွာ, သင်တစ်ခုခုလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီမှာကိုယ့်လယ်ပြင်ကျဉ်းမြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်သူတဦးတည်းမှ clueless င်သူသည်ဆိတ်သငယ်ထဲကနေလူတိုင်းအတွက်အကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။ (သင့်ဆိဆုံးဖြတ်ချက်ချ, သင်မူကားဒါသေချာ? ကြောင်းများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုလည်းရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ) နောက်ထပ်»
07 ၏ 04
နှစ်ချက်ဗိုလ်ကြီးနှင့်ထုပ်ပိုးအရွယ်မရောက်သေးသူများစွာသောလူတောင်ကျော 1970 နဲ့ '80s အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုခုကြဘူး။ သင်တို့သည်ဤအမှုအရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအပေါ်တစ်ဦးအမြန်မွမ်းမံလိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်, သင်ဒီမှာပြောပြလိုပါသည်ရန်လမ်းညွှန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်: အဓိက, ကအရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်နှစ်ဆဗိုလ်ကြီး။ နောက်ထပ် "
07 ၏ 05
ငတ်အဆိုတော်များ, အသုံးမကျအဓိက & အခြားကောလိပ်ဗိုလ်မှူးဒဏ္ဍာရီ
ဥပဒေစာကြည့်တိုက်။ မှ Ian Waldie / Getty Images အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ
c'mon, aw ။ ကဝန်ခံ။ သငျသညျကောလိပ်ဗိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုအချို့သောစေတယ်ရှိသည်။ သငျသညျဂီတသမားရှေ့နေများလှသောအောင်မြင်သောလိမ့်မည်, ငတ်, သင်၏ကလေး၏ကောလိပ်အဓိကကသူ့တစ်ခုလုံးကိုအနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မည်ဟုပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အဓိကရွေးချယ်ခြင်းကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အဆကိုပြောင်းလဲ - နှင့်သင့်စေတယ်များစွာကိုအမှန်တကယ်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ် "
07 ၏ 06
အသိပေးချက်, သတိပေးချက်များ & အရင်းအမြစ်များ
missteps နှင့်ထောငျခြောအပေါ်အနည်းငယ်နောက်ဆုံးမှတ်စုများ။ ကျောင်းဝင်းအပေါ်အကူအညီကိုရှာဖွေဘယ်မှာပေါ် Plus အားအကြံပေးချက်များ။ သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ပြီးသားကသူ၏ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်သူသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစင်တာတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီး paid တစ် grad ကျောင်းသားနှင့်အတူ chatted နှင့်အမှန်တကယ်သိကျွမ်းသူရှေးရှေးထဲကနေအဓိက lowdown ဆည်းပူးခဲ့သလဲ နောက်ထပ် "
07 ၏ 07
ဂီတ & ဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာအများစုအတွက်အသေးစိတ်
Courtesy ယောဟနျသ Siebert, Stock.Xchng ဓါတ်ပုံများ
ဂီတသမား, thespians, သိပ်ပြီးနှင့်အနုပညာရှင်များ၏သူတို့အားဗိုလ်ကြီးလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်ချက်များ၏တစ်ဖွဲ့လုံးကွဲပြားခြားနားသော set ကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သင့်ကလေးကိုအလားအလာဂီတသို့မဟုတ်ဒရာမာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒီခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ဂီတ & ဒရာမာအများစုကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေး 101 - ကောလိပ်ကျောင်းပြဿနာ, စာရင်းစစ်, applications များနှင့်ပိုပြီး vs. အဆိုပါ conservatory အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေပါလိမ့်မယ်။ အနုပညာကျောင်းတွေ, တွင်လည်းနှင့်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်, ကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေးအနုပညာအများစုအတွက် 101 ဖတ်ပါ။ နောက်ထပ် "
ဗာဂျီးနီးယား Tech မှဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Dallas မြို့က Cowboys PLAYOFF သမိုင်း
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦး EGR Valve ယနှင့်လိုက်တဲ့အခါဒါဟာပြုပြင်နေရမည်
က Tiger Woods '' ပြိုင်ပွဲနိုင်ပွဲများ
Form ကိုငါ-751 ထဲကဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
သော pH မီတာအဓိပ္ပာယ်
Millersville တက္ကသိုလ် Pennsylvania ပြည်နယ်၏အဆင့်လက်ခံရေး
နို့တိုက်သတ္တဝါများလူတိုင်းအကြောင်း 10 အချက်အလက်သိထားသင့်
ကွန်ဖက်ဒရိတ် P51 တိုက်လေယာဉ်တိုက်ခိုက်ရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Accents ကုဒ်များနှင့် Shortcuts: ပြင်သစ် accents ရိုက်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Bernhard Schlink အားဖြင့် "ဒီ Reader ကို" - တစ်ဦးကစာအုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Goûter - အရသာမှ